Ozi ala Uruguay | eTurboNews
Mbido » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Uruguay na -agbasa
Atiya - Uruguay Breaking News
Ozi na -agbasa na Uruguay - Njem & njem nlegharị anya, ejiji, ntụrụndụ, nri nri, ọdịbendị, ihe omume, nchekwa, nchekwa, akụkọ, na usoro.
Ozi Uruguay na njem banyere ndị njem na ndị njem njem. Akụkọ kacha ọhụrụ na njem na Uruguay. Akụkọ kacha ọhụrụ na nchekwa, họtelụ, ebe ntụrụndụ, ebe nkiri, njegharị na njem na Uruguay. Ozi njem Montevideo. Uruguay bụ mba South America a maara maka ime ala ya na ụsọ oké osimiri. Isi obodo, Montevideo, gbara gburugburu Plaza Independencia, bụbu ebe obibi nke nnukwu ụlọ ndị Spain. Ọ na-eduga na Ciudad Vieja (Old City), nke nwere ụlọ ịchọ mma nka, ụlọ ndị colonial na Mercado del Puerto, ahịa ọdụ ụgbọ mmiri ochie nwere ọtụtụ steakhouses. La Rambla, nke na-eme mkpagharị mmiri na-aga, na-agafe ụlọ azụ, ogige na ogige ntụrụndụ.
Uganda Airlines nwetara oghere ọdụ ụgbọ elu na London Heathrow
Uzo mbu nke Uganda Airlines choro na A330 bu London, Dubai, Guangzhou na Mumbai
Onye isi ala na-akwado ịdọ aka na ntị ndị njem US bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ...
Kwesịrị ka ndị America kwenyere ịdọ aka ná ntị njem America ma ọ bụ ndụmọdụ? Onye isi ala adịghị ...
Uruguay dọrọ ụmụ amaala ya aka na ntị ka ha ghara ịga US mgbe ha kụsịrị ọkụ na nso nso a ...
Gọọmentị Uruguay ewepụtala ndụmọdụ ndụmọdụ njem, na-adọ ndị obodo ya aka na ntị ka ha ghara ịga njem ...
Ọbụghị naanị njem nleta bịara na njedebe na Argentina, Uruguay ...
Nhazi nhazi mbu nke uwa ...